Kaligii Taliye Cusub oo ka sooo baxay Bariga Soomaaliya. |
Kaligii Taliye Cusub oo ka sooo baxay Bariga Soomaaliya.
Cabdi Raxman Faroole, hogaamiyaha mamaulka Puntiland ayaa lagu tilmaamay in uu yahay kaligii taliye yar oo hadii uu maamuli lahaa dal dhan aan la arkeen ruux lala meel dhigo ficilada uu ku dhaqmayana ay muujinayaan in uusan ogoleyn xoriyada hadalka
Faroole arintii ugu danbeysay waxa uu ku xirxiray Idaacado madax banaan isaga oo doonaya in ay kusoo haraan deegaanka uu kataliyo idaacado isagu uu madaxa ka heesto oo aan soo bandhigi karin tacadiyada uu kuhayo shacabka uu hoganaka u yahay.
Idaacahadaha uu xir xirtay ayaa waxaa kamid ah bar-kulan iyo Ergo waxa ayna ahaayen idaacado gooba fara badan laga dhageesto isaga oo dadaalkiisu yahay in waxa uu shacabka kuhayo aan goobahaan laga dhageysan.
Si kastaba Faroole oo maamulka Puntiland u soo talinayay afar sano oo ladoortay hadana ku darsaday sanad dheraad ah ayaa waxa uu ku haminayaa in uu ku sii dheganaado kursigaasi ilaa uu cimrigiisa ka dhameysanyo waxa uuna si taa uu ugu guuleesto ku dhiiranaaya in uu maro wadokasta qolyaha ceebtiisa banaanka soo dhigeysa sidii uu ku aamusin lahaa.